Home Wararka Ururka argagaxisada Al Shabaab oo iska fogeeyay hadalkii hay’adda NISA
Ururka argagaxisada Al Shabaab oo iska fogeeyay hadalkii hay’adda NISA
Ururka Argagaxisada Al Shabaab ayaa iska fogeeyay hadalkii ka soo yeeray hay’adda NISA. Al Shabaab ayaa shaagraty inaan la ogaan karin haddii ay damcaan inay dilayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Rooble.
Waxa kaloo Al Shabaab ay sheegeen inay garanaynin qof la yiraahdo Maxamed Maahir. Iyagoo wax lala yaabo ku tilmaamay Qoraalkii kasoo baxay NISA. Qoraal Goordhow kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa lagu beeniyay warka NISA ama inuu iyaga ka tirsan yahay qof Maxamed Maahir Lagu magacaabo.
Previous articleTaliye ku-xigeenkii hore ee NISA oo sheegay inuu jiro qorshe ay xildhibaano isku qarxin rabaan Xalane
Next articleBeesha Caalamka oo ku adkeeysanaysa in Garbahaareey lagu qabto doorashada
Axmad Madoobe oo guri u gaar ah kireystay, Ciidan ilaale ahna...